Ibsa Ejjennoo Ariifachiisaa Barattoota Oromoo Dhaabbilee Barnoota Olaanoo Hundaaf. | QEERROO
Posted on March 14, 2015 by Qeerroo
Adeemsi amma biyya keenya keessatti lafa dimookiraasiin hin jirreetti filaannoo dimookiraataawaa gaggeessa jirra jechuun ololli lallabamaa jiru kun dhaabbachuu qaba.
Adeemsi amma biyya keenya keessatti lafa dimookiraasiin hin jirreetti filaannoo dimookiraataawaa gaggeessa jirra jechuun ololli lallabamaa jiru kun dhaabbachuu qaba. Biyyatti keessa bu’uurri dimookiraasii hin jiru, ilmaan Oromoo jumlaan hidhaatti guuramaa, ajjeefamaa, barnoota irraa arii’atamaa fi doorsifamaa ,Oromummaan yakkamaa jiru.
Akkasumas Oromoon qe’ee fi qabeenyaa isaa irraa buqqa’aa, fi mirga abbaa biyyummaa dhabnee waan jirruuf biyya dimookiraasiin hin jirree fi mirgi namummaa fi dimookiraasii dhiitamaa jiru keessatti maqaa filannoo gaggeessina jedhuun kaardii filannoo hiruu fi olola sobaa filannoo dimookiraasii jechuun lallabuu dura mirgootni dimookiraasii fi namummaa kabajamuu qabu.
Haala rakkisaa kanaan uummatni keenya xaxamee utuu jiruu adeemsi amma Mooraa Yuunibarsiitii keessatti kaardii Filannoo hiruuf jirra jechuun mootummaan EPRDF lallabaa jiru jabeessinee balaaleffachuun, ibsa ejjennoo armaan gadii dabarsina.
Filannoo gaggeessuun dura Mirgootni dimookiraasii fi namummaa kabajamuu qaba;
Filannootti seenuun dura gaaffiin mirgaa fi dimookiraasii bara darbe Ebla irraa eegaluun hanga har’atti itti fufinsaan karaa nagaa gaafachaa jirruuf deebiin nuuf kennamuu qaba. Keessattuu rakkoon uummatni keenya gama siyaasaa, dinagdee fi hawwaasummaan qabu akka furamuuf gaaffii keenya xalayaa Iyyannoon dhiyeeffachaa kan jirruuf deebiin ariifachiisaan nuuf kennamu qaba;
Barattootni Oromoo gaaffii mirgaa fi dimookiraasii karaa nagaa waan gaafatan qofaaf jumlaan hidhatti guuraman haal duree tokko malee hiikamuu qabu. Kanneen ajjeefamaniif mootummaan yakka ajjeechaa rawwate seeratti dhiyaachuu qaba. Kanneen barnoota irraa arii’amanii fi doorsifamaa jiran irraa Mootummaan hiraarsa dhaabuu qaba, beenyaan qaamota midhaman hundaaf baafamuu qaba.
Bu’uurrii dimookiraasii hundeeffamee, boordiin filannoo gartuu mootummaa irraa bilisa ta’ee hundeeffamee filmaatni dhaabbilee Siyaasaa biyyattii hundaa fi kanneen bilisummaa uummata isaanii kabachiisuuf qabsoo gaggeessan hundi kan keessatti himatanii fi filmaatichi yoo qaamooleen leellistoota dimookiraasii addunyaa adeemsa filmata gaggeeffama jiru keessatti hirmachuun haallii yoo aanjeffame qofa filachuu fi filatamuun kan dada’amu ta’uu hubachiisuun adeemsa amma jiruu kanaan filamaata kanaatti kan hin hirmaanee fi kaardii filannoos fudhachuun gatii kan hin qabne ta’uu jabeessine hubachiifna;
Mootummaan ani dimookiraatawaa dha, filannoo dimookiraasiin gaggeessa jechaa jiru kun waraanaa fi human tikaa mooraa barnoota keessa qubsiisuun mirga keenya guutummatti sarbaa jira. Afaan qawweetti fayyadamuun dirqamaan dimookiraasiin jira, kaardii fudhadhu jechuun falla dimookiraasii fi abbaa irreemmaa ija baase ta’uu uummata keenyaa fi addunyaan hubachuu qabdi. Gaaffii dimookiraasii fi bilisummaa gama hundaan gaafachaa jirruuf filannoo dura deebiin nuuf kennamuu qaba; hanga gaaffiin keenya deebii quubsaa argatuttii Warraaqsi FDG jabaate kan itti fufu ta’a jennee ibsa keenya kana dabarfannee jirra.
Barattoota Oromoo yuunibarsiitii Jimmaa
Bitootessa 14, 2015
2 thoughts on “Ibsa Ejjennoo Ariifachiisaa Barattoota Oromoo Dhaabbilee Barnoota Olaanoo Hundaaf.”
Pingback: Biyya Dimookiraasiin hin jirree keessatti filannoo dimookiraatawaa gaggeessuun hin danda’amu. | OromianEconomist
AbdiiBaaleeOromiyaa ABO on March 14, 2015 at 1:48 pm said:
Akkam nagaa jirtuu,yaa ilmaan Oromiyaa,
Yaa qomoo Oromoo,obboleewwan kiyyaa,
Baga har’a geettan,hundi keessan fayyaa,
Yaadni koo isin biraa,yoo jiraadhes bayyaa,
Galata Rabbii guddaa,anilleen nagayaa!!!!!!!!!
Dhiifama naaf godhaa,xinnoo waa haasayaa,
Qalbiin adda baasaa,gurraan na dhagayaa,
Waa’ee Oromootaa fi waa’ee harmee biyyaa,
Kan hedduu na dhibe,waa’ee lammii kiyyaa,
Irratti mari’adhaa,furmaata naan gayaa!!!!!!!
Galata Rabbii guddaa,qaamaan numa jirraa,
Akka qorsoo bishaanii,fagaannus walirraa,
Bakkuma jirtanittii barbaadaa wal baraa,
Oromummaa dhugaatiin Rakkina walii furaa,
Hanguma qabdanii fi yaadaan wal gargaaraa,
Walirraa hin dheessinaa,jabaadhaa hadaraa!!!!!
Waa’ee baqattummaa,yeroo wal gaafannuu,
Waan heddutu jira,wanti nuti yaadannuu,
Abdii sabaa fi biyyaati,gaafa karaa yaanu,
Dureeyyii akkat mitii,wanti nu dhaadannu,
Wallee,hin beekne silaa,akka abiddatti gamnu,
Osoo beekna tahee,silaa manaa hin baanuu,
Waa madaala hin qabu,rakkoon nuti baannuu,
Nyaatuu fi dhuguudhaan jijjiiramuu hin taanuu,
Ka’aa bakka jirruu,dhugaaf haa falmannuu,
Duuti dhiiraa takkaa,si’a lama hin duunuu,
Lukkeelee Wayyaanee,karaa haa hobbaafnuu,
Gabroomsaa dullacha ofirraa haa kaafnuu,
Hinjireewwan Kaabaa,Finfinnee haa yaafnuu!!!!!!!!
Rakkinaa fi bal’inaan miira waliif obsuu,
Bakkuma jiranitti,yaadaan wal jabeessuu,
Tokkummaa uumanii,aadaa ofii guddisuu,
Walitti dhihaatanii,seenaa wal barsiisuu,
Ilaalcha gargariin,wal qoqqooddaa dhiisuu,
Oromummaa dhugaa,qabsoon mirkaneessuu,
Rabbummaan tokkochi mee nu haa badhaasuu!!!!
Akkam nagaa bultee,jennee wal gaafannaa,
Ofii biyyuma keenyatti alagaan dhiitamnaa,
Mirgaa keenya dhabnee,biyyaa ari’amnaa,
Akka Kuruphee mukaa,silaa adamfamnaa,
Halkanii fi guyyaa,waraanaan eeggamnaa,
OROMUMMAA qofaaf hidhatti darbamnaa,
Inni kuun hidhama,kuuwwan mana rafnaa,
Kuuwwan ajjeeffama,kuun biyyaa baqannaa,
Biyyarraa baqachuu,waan gurguddoo seena,
Kana rakkoo tahee,gamtokkoon madoofnaa,
Kan du’e awwaalannee,deebineetiin rafnaa,
Silaa,gariin namaa,diinaaf harka dhoofnaa,
Silaa,abbaan garaa,dabarsee nu kennaa,
Bakkayyuu adamsaa,warreen akka sanaa,
Gaafas Bilisummaa kallattiin argannaa!!!!!!!!
Mee wal haa gaafannuu,nuti eessa jirraa,
OROMOOn gamtokkoo,maaliif rafa nurraa,
Dhiiroo Arsii fi Baalee maali oduun harraa,
Moo Bilisummaa dhuunfaa,argatani carraa,
Moo silaa Arsii fi Baalee gootatu dhumeeraa,
Silaa Bosona nurraa guban Cilaaloo gubbarraa,
Gaalamaan gubachuu,ani dadhabee garaa,
Osoo kana arginuu maal eegna diinarraa,
Warri itti dhihoo jirtan sosochoosaa maraa!!!
Qomoo Sikkoo Mandoo,ilmaan Arsii fi Baalee,
Osoo lubbuun jirru,diinni maaf nu dhaalee,
Warraaqsatti ka’aa,diinaan mormaa malee,
Kan bosona gubaaruu,faallaan nutti galee,
Warra nu gurguraa jiru,hattuun walii galee,
Of keessaa haa baafnu,jaratu nu sakaalee!!!!
Gootowwan qabsoodhaa,goottan akka kalee,
Barataa fi barsiisaan keenya waliif galee,
Ummatnis ol ka’ee,goottan moggaa galee,
Wayyaanee fonqolchuuf,kunootii fincilee,
Dhaabni diinaa cabee, bututee akka malee,
Mataa qofaan hafe,caccabsan mogolee,
Sirni gabroomfataas,dhama’e akka malee,
Saba walitti buusaara,waan ta’u wallaalee,
Itti haa fuftu qabsoon,jabaadhaa ammallee,
Bilisummaa arguun,wanta nurraa hin oollee!!!!!
Maatii keenya dhiifnee,biyyarraa baqannee,
Mirgaa fi biyya gannee,godaantota taanee,
Jalaa dheessuun maalii,biyyaa teenna gatnee,
Namatu nu gabroomse,bilisaan dhalannee,
Kaanee,haa falmannu,nama tokko taanee,
Ofirraa haa kaafnu,hinjirree Wayyaanee!!!!!
Namuu fayyaa hin qabu,keessaan dhukkubsataa,
Yaada fi hawwii qabu,wal dhoksaa jiraataa,
Dhugaa haa dubbannuu,san waaqni jaalataa,
Sirritt wal haa taanuu,diinni nu sodaataa,
Karaarraa haa kaafnuu,gufuu nama nyaataa,
Deebii gaafii kootii,tokkummaan furmaataa,
Oromummaan dhugaa,yoo san nuuf mul’taa!!!
Dhaamsa koo dabarsaa,Oromoota maraa,
Abdii Baalee Oromiyaa,asuma Afrikaa irraa,
Walitti birmadhaa,sabni wal gargaaraa,
Mataa diinaa dhahaa,gadhee morma muraa,
Gabroomsaa kuffisuuf,wal wajjiin hiriiraa,
Hanga yeroo biraatti nagaan naaf turaa!!!!
Gadaan Oromootaa,Gadaa BILISUMMAA,
Akkanatti hin hafnu,galmi WALABUMMAA,
Itti fufti qabsoon,hanga BIRMADUMMAA,
Inuma arganna,mirga abbaa Biyyummaa,
Hundaa bira gahuuf,furmaanni TOKKUMMAA,
Walitti birmadhaa,gabroomfataa falmaa!!!!!!!!!
Abdii Baalee Oromiyaa-ABO